musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » World Tourism Network Bangladesh Chitsauko Hutungamiri & Kutarisisa
Bangladesh Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • Press zvinoburitswa • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
World Tourism Network Inofarira Mapoka uye Zvitsauko zvakaunzwa muMalaysia, Balkan, Saudi Arabia, Africa, nedzimwe nzvimbo zhinji. Zvikwata zvekufarira zvinorumbidzwa nemapoka ehutungamiriri anobata chero chinhu kubva pakubhururuka kuenda kune vaeni, kurunyararo kuburikidza nekushanya. Chitsauko chitsva chiri muBangladesh chinounza ruzivo uye hutungamiriri mukusanganiswa kwesangano idzva iri.
The World Tourism Network yakazivisa kuumbwa kweBangladesh Inofarira Boka / Chitsauko pasi pehutungamiriri hwaHM Hakim Ali.
Nemapoka anofarira, iyo World Tourism Network (WTN) inopa nhengo dzayo nezwi rakasimba renzvimbo, nepo panguva imwe chete ichi kusanganisira iri izwi remuno kune chikuva chepasi rose.
WTN yakatanga iyo kuvaka.travel hurukuro munaKurume 2020 uye yanga ichikura seyakavanzika-yeruzhinji kudyidzana inomiririra mazhinji epakati-kusvika madiki emabhizimusi ehukuru munyika 127.
Bhangiradheshi, kuMabvazuva kweIndia paBay of Bengal, inyika yeSouth Asia inoratidzirwa nehuswa hwakasvibira uye nzira zhinji dzemvura. Yayo Padma (Ganges), Meghna, uye Jamuna nzizi dzinogadzira mapani akaorera, uye kufamba nechikepe kwakajairika. Kumahombekombe ekumaodzanyemba, maSundarbans, sango hombe remangrove rakagovaniswa neEastern India, musha weRoyal Bengal tiger.
Kusvika pakatanga COVID-19 munaKurume 2020, kushanya kwave kusimba uye chimwe chezvikamu zvinobatsira kwazvo kuhupfumi hwenyika pamwe nekunyika zhinji dzichiri kusimukira seBangladesh.
Bangladesh ine dzakawanda zvakasikwa, zvetsika, nhoroondo, zvekuchera matongo, zvechitendero, uye zvakagadzirwa nevanhu nzvimbo dzekushanya. Nekushanyira nyika ino, mumwe ane mukana wekuziva vanhu verudzi uye yavo yakasarudzika tsika, tsika, chikafu, uye mhuka dzesango dzemarudzi akasiyana siyana. Vashanyi vanogona zvakare kunakidzwa nemhando dzakasiyana-siyana dzinoenderana nekushanya senge skiing yemvura, rwizi kufamba, kukwira, kukwasva, yachting, kugeza kwegungwa, nezvimwe.
Iyo indasitiri yekushanya inoonekwa seindasitiri inokura yenyika zhinji dzichiri kusimukira. Inoita chinzvimbo chakakosha zvakananga uye zvisina kunangana mukukura kweGDP kweBangladesh nekugadzira mikana mitsva yekuwana mabasa evanhurume nevanhukadzi, kudzikisira hurombo, kusimudzira kutora chikamu kwenharaunda, kuwana mari yekune dzimwe nyika kuburikidza nevashanyi vekunze, kugadzirisa hupfumi hwevanhu veko, uye kugadzira vanhu vakagadzikana mune zvehupfumi nehupfumi.
World Tourism Network ndiro izwi rekare-risingapfuure rezvidiki- nepakati-saizi yekufamba uye mabhizinesi ekushanya kutenderera pasirese. Nekubatanidza kuyedza, WTN inounza kumberi izvo zvido uye zvishuwo zvemabhizimusi madiki nepakati nepakati nevanovabata.
Vazhinji muBangladesh vanoti VaHM Hakim Ali ndivo vakavamba indasitiri yekushanya muBangladesh. Akashanda seMutungamiriri weBangladesh International Hotel Association.
Mune chirevo chevatori venhau nhasi, World Tourism Network inodada kuzivisa kugadzwa kwe Mr. HM Hakim Ali kutungamira iyo nyowani WTN Bangladesh Inofarira Boka.
Juergen Steinmetz, Sachigaro, WTN
Sachigaro weWTN Juergen Steinmetz akati: “Zvandakaenda kuBangladesh, ndaona mukana weindasitiri yekufambisa neyekushanya uye ndinonzwisisa mamiriro ezvehupfumi munyika iyoyo. Tinovimba boka redu idzva rekufarira, uye VaAli semutungamiri, vachaita mutsauko mukuru mukufambisa indasitiri yekushanya muBangladesh kuburikidza nedutu re COVID-19.
"Mabhizimusi epakati nepakati kusvika madiki anoita basa rinotungamira uye rakakosha muBangladesh, uye WTN yakagadzirira kugara nekuda kweboka iri vakabatana naVaAli nekomiti yavo yakanaka yeBangladesh vatungamiriri vezvekushanya nekushanya."
HM Hakim Ali, Sachigaro, WTN Bangladesh Chitsauko
WTN Bangladesh Chitsauko Mutungamiri HM Hakim Ali, anova zvakare muridzi we Hotel Agrabad Ltd.., Akazivisa komiti yake inoumbwa nenhengo gumi nenhatu.
Nekuunza pamwechete zvakavanzika uye neruzhinji chikamu chevamiriri pamapuratifomu uye epasirese mapuratifomu, WTN haisi kungotsigira nhengo dzayo chete asi inovapa ivo izwi kumisangano mikuru yekushanya.
Nekushanda pamwe nevatori vechikamu uye nevekushanya pamwe nevatungamiriri vehurumende, WTN inotsvaga kugadzira nzira dzekuvandudza nekusanganisa uye nekusimudzira chikamu chekushanya uye kubatsira mabhizinesi madiki nepakati uye emabhizimusi ekushanya panguva dzese dzakanaka nedzinonetsa.
Icho chinangwa cheWTN kupa nhengo dzayo izwi rakasimba remunharaunda panguva imwechete ichivapa nepuratifomu yepasirese.
WTN inopa yakakosha yezvematongerwo enyika uye bhizinesi izwi kune zvidiki- nepakati-saizi mabhizinesi uye inopa kudzidziswa, kubvunza, uye mikana yekudzidzisa.
"Kuvakazve Kufamba”Danho kutanga hurukuro, kuchinjana mazano, uye kuratidzira maitiro akanakisa nenhengo dzedu munyika dzinopfuura zana nemakumi matanhatu.
The "Gamba" Mubairo unoziva avo vanoenda mamaira ekuwedzera vachinoshandira nzanga yekufambisa neyekushanya asi kazhinji vanokanganikwa.
The "Yakachengeteka Tourism Seal"Inopa vatinoshanda navo nenzvimbo dzekuvakira chikuva chekuratidzira kuda kwavo kuvhura kushanya zvakachengeteka uye zvine mutsindo.
Kuzadzikisa zvinangwa izvi, WTN inokurudzira kuumbwa kwemapoka anofarira, kusanganisira zvitsauko zvemuno, izvo zvinokwanisa kugadzirisa nyaya dzenzvimbo nepasirese munzvimbo dzakatarisana nenzvimbo nepasirese.
Iyo WTN Bangladesh Chitsauko
HM Hakim Ali - Mutungamiri
MN Karim - Mutevedzeri weMutungamiri
Mehedi Amin - Mutevedzeri weMutungamiri
Syed Ghulam Qadir - Secretary General
Syed Ghulam Mohammed - Mutungamiriri
Syed Mahbubul Islam - Mutungamiriri
Mohammad Irad Ali- Director
Nazrul Islam - Mutungamiriri
WTN Headquarter iri mu Honolulu, USA. https://wtn.travel/ https://wtn.travel